Remoras - Ubomi base Lwandle - Mzantsi Afrika
Suckerfish, Sharksucker, iGapu
Ukufikelela kwi-90cm, umyinge we-40cm.
Umzimba odibeneyo. INtloko igqityiweyo. Ukuqala kokugqithisa ukugqitywa kwidiski kwidiski eselisayo kunye nochungechunge lwamacwecwe. Umhlathi ongaphantsi ujikeleza umhlathi ongasentla. Ininzi emnyama ngelayini emhlophe okanye emhlophe.
Intsapho ye-Echeneidae iqukethe ii-4 zezifo kunye neentlobo eziyi-8. I-khwela kwii sharks, imisebe, ii-turtles, iintlanzi ezinamathambo, iimbhokhwe kunye namahlengethwa. Sebenzisa i sucker ukuba unamathele kumphathi.
Ngamanye amaxesha kufumaneke kufakwe kwiinqanawa okanye kwiindawo ezahlukeneyo. Kubonakala ngathi ibhukuda ngenxa yokuma kwintloko. Uhlanza ii-bacteria kunye nee-parasites ukusuka kumphathi. Abahlaziyi bePelagic.
Ukutya kwi-ntsalela ukusuka kumphathi. Ezinye iintlobo zondla kwizilwanyana zomkhosi.
I-remora edityanisiweyo (Echeneis naucrates)